Tsuyu 1L & Chukasoba 250g ( Se004 ) (Set Menu) – YURI Japanese Food Online Shop
Yuri is Myanmar’s leading Supplier of Japanese Foods and Beverage Products.
Curry ဂျပန်အသင့်သုံး ဟင်းအနှစ်
Ramen ( ဂျပန် ခေါက်ဆွဲ )
Ready soup (အသင့်သုံးဟင်းချို )
Local Product (ပြည်တွင်းဖြစ် Quality Foods)
Ready Food (အသင့်စားစရာ)
Frozen Food (Fish & Meat)
Set Menu တွဲဖက်ဟင်းလျာ
Home › Tsuyu 1L & Chukasoba 250g ( Se004 ) (Set Menu)
Tsuyu 1L & Chukasoba 250g ( Se004 ) (Set Menu)
YURI Japanese Food Online Shop
Default Title - K-9,200 MMK Quantity
အလွန်နူးညံ့သော ဂျုံသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ခေါက်ဆွဲ ဖြစ်ပါသည် ၅မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီး မိမိနှစ်သက်ရာ ဟင်းလျာလုပ်စားနိုင်ပါသည် ဂျုံသား ကောင်းမွန်လှသဖြင့် အလွန် ထူးခြားသော အရသာရှိပါသည်
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော မနက်ခင်း အဟာရစားစရအဖြစ် ကြက်သွန် နီ ဖြူ ဆီသတ် TSUYU ဂျပန်ဟင်းချက် SAUCE အနည်းငယ် ဆမ်းပြီး ဒီအတိုင်းနယ်စားလျှင်လည်း အလွန်အရသာရှိသည့်မနက်ခင်း ဂျပန်ခေါက်ဆွဲသုတ် တစ်ပွဲရရှိစေပါသည်။
SALMON FILLET PIECE 200G & Ichibiki Tsuyu 500ml ( Se021 ) (SET MENU)
Regular price K-11,100 K-11,100
SALMON SLICED SASHIMI 20PCS 180++G & Ichibiki Tsuyu 500ml ( Se020 ) (SET MENU)
Regular price K-14,700 K-14,700
Ichibiki Tsuyu 500ml & Chukamen 250g ( Se002 ) (Set Menu)
Regular price K-7,000 K-7,000
Ichibiki Tsuyu 500ml & Chuka soba 1Kg ( Se009 ) (Set Menu)
Regular price K-13,300 K-13,300
Ichibiki Tsuyu 500ml & Chuka soba 250g ( Se005 ) (Set Menu)
Regular price K-7,700 K-7,700
ယခုအခါပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါသဖြင့်နောက်ကျခြင်းများရှိ ပါကနားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည် ။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းပို့ဆောင် ခ 10 ကီလိုထိ 2500 ကျပ်ကျသင့်ပါသည်။
နယ်မှ မှာယူပါက ရန်ကုန်ကားဂိတ်ထိ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးပြီး နယ်သို့ကားဂိတ်များ မှပို့ဆောင်ပေး မည်ဖြစ်ပါသည် ထုတ်ပိုးမှု့အဆင်ပြေစေရန်နှင့် စားသုံးသူမှပို့ဆောင်ခမနစ်နာစေရန် အတွက် အနည်းဆုံး ကျပ် ၂သောင်းအထက် မှာယူ စေလိုပါသည်
မိမိပို့ဆောင်လိုသည့် ကားဂိတ်ကိုသေချာ ဖေါ်ပြပေး ပါရန် နှင့် ဖုံးဖြင့် အကြောင်းကြား ပေးပါ ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စည်းတန်ဖိုး ကိုမူဘဏ်မှ ငွေလွှဲ ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ဘဏ်အခဲများကြောင့် ကမ္ဘာရတနာဘဏ် ရတနာလမ်းဘဏ်ခွဲ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများဘဏ် ရတနာလမ်းခွဲ တို့သာ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်လွှဲ၍ရပါသည် ငွေမလွှဲမှီအောက်ပါဖုံးနံပါတ်များသို့ ဖုံးဆက်ပေးစေလိုပါသည်
ဖုံး 09-4444-55847 , 09-4444-55843
Aya - Mobile Bank , KPAY တို့ ဖြင့်လည်းပေးချေ၍ရပါသည်, သို့သော်အခက်အခဲများကြောင့် 3% ထပ်ပေါင်းကျသင့်ပါမည်
ငွေ ဝင်ကြောင်း စစ်ဆေးပြီး ပါက နောက်တစ်နေ့ကားဂိတ်မှ ပို့ဆောင် ပေးပါမည်၊ ပို့ခကျသင့်ငွေကိုကားဂိတ်တွင်ပေးချေ ၍ ရွေးယူနိုင်ပါသည်။
ငွေလွှဲစဥ်ပေးပို့သူအမည် မြို့အမည် တို့နှင့် ပစ္စည်းမှာ ယူသူအမည် သို့မဟုတ် ဖုံးနံပါတ်တစ်ခုခုကို သေချာထည့်ပေးစေလိုပါသည် ။
09-4444-55847 , 09-4444-55843
Online နှင့် Messenger Order များ မှာယူစဉ်လိပ်စာထည့်သော နေရာ တွင် လိပ်စာအမည် ဖုံးနံပါတ် တို့ကိုသေချာရေးသားပေးစေလိုပါ သည် ။
Postal Code နေရာတွင် မိမိရပ်ကွက် စာတိုက်နံပါတ် သို့မဟုတ် 01 သို့မဟုတ် နံပါတ်တစ်ခု ထည့်ပါ Blank မထားရပါ။
အောက်တွင် Email လိပ်စာကို ပေးပို့ ထားပါက ကျွန်ုပ်တို့ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်မိတ်ဆက်ခြင်းများ Promotion အစီအစဥ်များ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ကို သင့် Email မှတစ်ဆင့်အကြာင်း ကြားပေးပါမည်
Yuri Store ပစ္စည်းအမှာများပေးပို့ခြင်းအား အခါကြီးရက်ကြီးရုံးပိတ်ရက်များမှ အပ တတ်စွမ်းသရွေ့ နေ့စဥ် ပေးပို့ ပေးပါသည် တနင်္ဂနွေနေ့နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များတွင် မနက် ၉ ညနေ 3နာရီထိသာပေးပို့ပါသည် အမှာမှာယူစဥ် နေ့လည် ၁၂ နာရီမတိုင်မီအမှာများအား ရန်ကုန်မြိုတွင်း ဆိုပါက ချက်ချင်း နေ့ချင်းပေးပို့နိုင်ရန် စီစဥ်ထား ပါသည် သို့ပါသော်လည်း ယခုကာလ တွင်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းများလုံခြုံရေး အခက်အခဲ လမ်း ကြောင်း အခက် အခဲ များကြောင့် မမှီလိုက်ပါက နောက်နေ့ တွင် ပေးပို့နိုင်ရန်စီစဥ်ထားပါသည် .
ပိတ်ရက်များရှိပါကရုံးပြန်လည် ဖွင့်သည့် ရက် တွင် သာပေး ပို့ပေး ရခြင်းကို နားလည်ပေးပါရန်မေတ္တာရပ် ခံအပ်ပါသည်၊
ပစ္စည်းမပေးပို့မီ မှာယူသူဖုံးနံပါတ်သို့ ဖုံးဆက်ပါမည် ဖြစ်ပါသဖြင့်လက်ခံ ဖြေကြားပေးကြပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံပါသည် . ဖုံးလက်ခံမဖြေကြားပါက ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်းကို နောက်တနေ့သို့ရွှေ့ပါမည်
09-4444-55847 ,09-263-222-490 , 09-9841-88999 တို့ကိုဆက်သွယ် ၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်
အဆင်မပြေမှု့ များလိုအပ်ချက်များရှိပါက ဖုံး
09-9841-88999, 09-9861-66999 သို့တိုက်ရိုက် အကြောင်း ကြားနိုင်ပါသည် .
IOS Mobile App Download
© 2022 YURI Japanese Food Online Shop